Rouhani oo booqasho rasmi ah ku tagay Ciraaq • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Rouhani oo booqasho rasmi ah ku tagay Ciraaq
Rouhani oo booqasho rasmi ah ku tagay Ciraaq
Hassan Rouhani iyo Madaxweynaha Ciraaq Barham Saleh
Madaxweynaha Iran Hassan Rouhani ayaa booqasho sadex maalmood ah u tagay dalka ay jaarka yihiin ee Ciraaq, xili dowlada Iran wajaheyso cadaadiska uga imaanaya Maraykanka oo ay ciidamadiisa ku sugan yihiin wadankaasi.
Safarkan ayaa ah kii ugu horeeyey oo rasmi ah oo uu Rouhani ku tago Ciraaq tan iyo intuu xilka qabtay, wuxuuna shalay booqasho ku tagay qaar kamid ah xarumaha shiicada ee dalkaasi ku yaal, isagoo sidoo kale kulamo la yeeshay Madaxda dalkaasi Madaxweynaha iyo Raysalwasaaraha.
Hogaamiyaha Iran ayaa doonaya inuu sii xoojiyey xiriirka ka dhaxeeya Ciraaq iyo Iran oo xiligii dowladii Sadam Xussen ahaa labo dal oo uu dagaal ka dhaxeeyo, balse xiriirka hada ee Tehran iyo Baqdaad ayaa ah mid wanaagsan waxayna xukuumada Iran taageero militari siisay dowlada Ciraaq dagaalkii ay kula jirtay Daacish.
Maraykanka oo isagu hada cunaqabateyn horleh kusoo rogay Iran ayaa dhanka kale ku cadaadinaya Ciraaq inay xiriirka u jarto dalkaasi ay jaarka yihiin, halka Iran ay dooneyso inay xakameyso awooda Maraykanka iyo ciidamadiisa ku sugan dalkaasi deriska la’ah.
Iran ayaa hada maalgelisa qaar badan oo kamid ah maleeshiyaadka shiicada Ciraaq, ciidanka Iran ayaa sidoo kale saldhigyo ka sameysatay gudaha wadanka Ciraaq, goobahaasi oo la rumeysan yahay in militariga Iran doonayo inuu dhigo gantaalada ridada dheer oo ay ku duqeyn karaan Israel hadii uu weerar kadis ah uga yimaado xulafada Maraykanka & Israel.